Talooyinka app music Apple
. Talooyin adeegyada
. Geeyo Apple
. Talooyinka music Apple
. Ku raaxayso music Apple
. Music software Apple
. Adeegga Apple Music
. Talooyinka Times
. Talooyin Apple Music Kulanka
. Apple Beats Music
. Maktabadda music Apple
. Lugood Apple Music iCloud
. Qaabka iyo xadadka
. Qaybsiga Qoyska
. Downloader Best
. Apple Music Kaydinta
. Iidda Apple Music
Talooyinka Apple Music App
Qeybta 1: Features ee Apple Music app
Qeybta 2: Hagaha Apple Music app
Qeybta 3: Download geeyo music free la TunesGo
Apple music app waa mid ka mid ah barnaamijyadooda ugu isticmaalay oo caan ah ma ahan oo keliya milkiilayaasha qalab Apple laakiin sidoo kale Android isticmaala. App music wuxuu ku siinayaa inaad hesho ka Lugood buugga dhameystiran, sidoo kale la ama u la'aan oo ka mid ah qaar ka mid ah muuqaalada fantastic iyo caddaymaha. Si aad u samayso faa'iidada ugu badan app ah, waxaa muhiim ah in la ogaado oo ku saabsan mid kasta oo ka mid ah qaababka iyo si dhab ah u isticmaalaan oo dhan. Waxaa intaa dheer, waxa ay sidoo kale waa muhiim inaad fahamto sida loo isticmaalo app in ay ku raaxeystaan ​​ku music aad jeceshahay ku yaal. Hoos siiyo waxaa ku qoran liiska astaamaha ugu weyn ee in app this waxay bixisaa:
Trial- Free mid ka mid ah qaababka ugu cajiib ah oo app tani waa in ay kuu ogolaanayaa inaad isku daydo waxaa 90 maalmood gudahood ah markii shir sanadeedkii la lahayn premiers paywall.
Playlist sharing- Apple music app waxay kale oo keentaa inaad muujinta ah ee la wadaago playlist, Si kastaba ha ahaatee waxa ay ku kooban waa in dareen gaar ah. Taas macnaheedu waa in aad playlists aad saaxiibada la wadaagi karto waxana ay dhegaysan Mudan in sidoo kale.
Helitaanka stations- radio sifayn Misbaax ka sokow helitaanka malaayiin kuwan raadkaygay iyo heeso inay dhegaystaan, waxa kale oo aad u helaan idaacadaha ku sifayn Misbaax oo dunida ku baahsan u helaan, ciyaaro music noocyada iyo luqado kala duwan.
Line of Beats1 fanaaniinta la track lists- tani weli waa muujinta kale kubad ay bixiyaan music app Apple ah. Waxay keenaysaa in aad line kala duwan ee fanaaniinta Beats1 liiska track.
Raac jecel artists- kale oo aad fursad u helaan in ay raacaan fanaaniinta aad jeceshahay iyada oo app music this, in qeybaha bulshada oo ay u soo Bixiyaa wax kugu mahad naqo.
Waxaa loo isticmaali karaa badan devices- Apple music app waxaa loo isticmaali karaa on qalab kala duwan oo ay ku jiraan iPhone, iPad, iPod taabto, Macs iyo kumbiyuutarada. Waxa la yaab leh si kastaba ha ahaatee waa in app this sidoo kale loo isticmaali karaa qalabka Android ku salaysan.
Dhegayso Offline- feature kale oo laga yaabaa in aad rabto in aad isticmaasho on Apple Music app waa muujinta music offline. Isticmaalka app this, Waxaad dhegaysan kartaa music aad xitaa marka aan la xiran internetka. Taas waxaa la samayn karaa iyadoo heesahaaga qalab aad furaa offline dhegeysiga. Markaasay aad ku sawirnaa calaamad saddex dhibic soo socda la siiyaa wax ka dibna tubbada ah si ay u offline heli karo sameeyo. Haddii aad rabtid in aad aragtid waxa dhammaan waxyaabaha aad u badbaadiseen in ay dhagaystaan ​​offline, ka dibna waxaad tagi kartaa aan music> dhawaan ku daray> xulista category> Show Music offline heli karo. Waxa kale oo aad noqon kartaa goob taas ka baxsan si ay u arkaan dhammaan music, oo ay ku jiraan kuwa lagu kaydiyaa iCloud Music Library.
Hoos siiyo waa hage loogu talagalay fulinayso hawlaheeda kala duwan ee app:
1. Maareynta heeso iyo playlists
The tab My Music on app ee waa wax fudud in aad dhirtuba ay dhex maraan ama dhammaan music, eegin meeshay ka timaado. Dhammaan cusub ku daray songs, playlists oo albums waxaa lagu hayaa sare ee My Music ee dhawaan ku daray helitaanka sahlan oo dhakhso ah. Waxaad kala sooci karto music ku salaysan fanaaniinta, heeso, albums oo xitaa qaybaha kale.
Add- heeso daro in playlists, waxaad tagi kartaa shaashadda playlists, ka jaftaa dari songs, baadhaan ama caleenta in wadada aad rabto in aad ku darto, ka jaftaa button + ay ku darto oo samaysay tuubada.
Search for-haddii aad rabto inaad raadiso hees aad u baahan tahay inay hesho on muraayadda weynaynaya Midigta sare iyo sidoo kale doortaan Music My ka Tab. Hadda galaan song in aad rabtid in aad ka raadin. haddii aad rabto inaad raadiso hees aad u baahan tahay inay hesho on muraayadda weynaynaya on xaq u sareeya oo sidoo kale ay doortaan Music My ka Tab. Hadda galaan song in aad rabtid in aad ka raadin.
Delete- in ay tirtirto playlist ah, aad ku sawirnaa badhanka oo dheeraad ah si xaq ah playlist, tuubada tirtirto hormariyo tirtirto playlist si loo xaqiijiyo.
2. Isticmaalka Mini ka Player
Marka aad la ciyaareyso hees aad app music Apple, ka dibna waxaad awoodi doontaa inaad si ay u arkaan miniplayer a hoose ee shaashadda. Laga soo bilaabo halkan, waxaad kala socon kartaa Author dhex heeso kale ilaa aad ka heli taas oo ka mid ah aad rabto in ay dhagaystaan. Haddii aad rabto in ay dhagaystaan ​​ururinta gaar ah ee artist ee markaas waxaad ka heli kartaa artist ee My Music.
3. Samaynta iyo isticmaalka playlists
Waxaad sidoo kale abuuri kartaa playlists ku app Apple Music inay dhegaystaan ​​ama la wadaagto asxaabtaada. Haddii aadan arki tab ee Playlists, ka dibna aad ku sawirnaa on Music ah My ka dibna garaac Playlists taas oo u muuqata sare ee shaashadda. Hadda waxaad isticmaali karaan on New si ay u abuuraan playlist cusub ka dibna ku dar songs, waxa uu. Waxa kale oo aad ku dari kartaa horyaalka, sharaxaad iyo image u playlist cusub la abuuro.
4. Isticmaal ilaa Next
Up Next waa asal ahaan sida ay u mudnaanta playlist janjeerta taasoo kuu ogolaanaysaa inaad muusiko dhegayso, kaas oo aad si lama filaan ah u horumariyaan niyadda ah in ay dhagaystaan, oo aan run ahaantii dilay songs la qarka u socda si aad u dhagaysan. Habkaani wuxuu ku muuqan Galiyo dib liiska aad dhagaysanayso daafaca midig ka dib markii aad samaysay dhagaysto song in uusan iska leh waa in ay.
5. Sida loo Airplay
Airplay wax yaabahan ee Apple ayaa music app oo kuu ogolaanaysaa inaad qaato wax kasta oo aad qabto oo ku saabsan iPhone ama iPad iyo looxii dunta, waxa uu Apple TV ama ku hadla in la jaanqaadaan. Taas macnaheedu waa in wax kasta oo ka kooban yahay waxaa ku Lugood aad si fudud ayaa loo gudbin karaa qolka aad ku nooshahay guriga oo dhan si ay ugu raaxaystaan. Tan waxaa laga yaabaa songs, albums oo xitaa playlists.
Download hoorto music free la TunesGo
Sida loo Download Soundcloud Songs on iPhone
Download Pandora u PC
Top 6 music track / artist editor
Top 20 Facebook Music Apps talinayo
> Resource > Music > Talooyin Apple Music App